Wednesday May 02, 2018 - 10:39:40 in Wararka by Super Admin
War Rasmi ah oo kasoo baxay Wasaaradda arrimaha Dibadda Marocco ayaa lagu sheegay in Dowladaas ay go'aansatay joojinta xiriirka kala dhexeeya Iiraan kadib ay ku eedeysay khalkhal gelinta ammaanka wadankeeda.
Warka Wasaarada Arimaha Dibada Marocco ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay soo qaadatay safiirkii ka joogay magaalada Dahraan ee wadanka Iiraan, ayna Ceyrisay safiirkii iiraan u fadhiyay magaalada Rabaad.
Naasir Bureyd oo ah wasiirka arrimaha dibadda Dowladda Marocco ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Rabaad wuxuu ku sheegay in tallaabadan ay qaateen kadib markii Iiraan ay halis gelisay amniga gudaha wadankiisa.
Wuxuu sheegay in Ururka isku magacaabay Xisbullaah ee iiraan ay taageerto uu shixnado hub ah ku taageeray maleeshiyaadka gooni ugoosadka ah ee ka dagaallamaya mandiqadda saxaraha Galbeed.
Marooko ayaa sheegtay in Iiraan ay taageero dhanka maaliyadda iyo hubka ah ay siisay jabhadda Bolisaariyo ee ka dagaallanta saxaraha galbeed, isla markaana safaaradda Iiraan ee ku taalla Rabaad taageeradaas loosoo mariyay.
Ururka Shiicada ah ee isku magacaabay Xisbullaah, isla markaana ay taageerto Iiraan ayay sidoo kale Marooko ku eedeyday inuu hub kasoo geliyay dhanka wadanka Jazaa'ir uuna ku wareejiyay Jabhada Bolisaariyo ee 43-da sanadood dagaalka kula jirta Marooko.
Jabhada Bolisaariyo ayaa sheegata inay u dagaalamayso sidii dhulka Saxaraha Galbeed uu madax banaani uga qaadan lahaa wadanka Marooko, waxaana ay Jabhadaan taageero ka heshaa dhowr waddan oo ku yaalla caalamka.
Sanaddii 2009 ayuu sidaan oo kale u go'ay xiriirkii u dhaxeeyay Iiraan iyo Marooko kadib markii Tahraan ay Rabaad ku eedeysay in ay faragelin ku heyso arrimaha gudaha Wadanka Baxreyn ee khaliijka carabta, xilligaas ay kacdoon ka wadeen dadka shiicada ah.
illaa iyo hadda wax jawaab celin ah kamasoo bixin dowladda shiicada iiraan oo ku aaddan cilaaqaadka loo jaray.
Tallaabadan ayaa dhanka kale imaanaysa xilli Xukuumada Iiiraan ay sanadadii dambe aad xooga u saartay marshuuca faafinta diinta shiicada oo ay kusii ballaarinaysay wadamada dhaca waqooyiga qaarada Afrika ee Maqribul islaam laysku yiraahdo iyo inta badan wadamada Carabta.